CUBE – Design / System Network Integration
We are the most experienced and dependable organizations engaged in full-scope Interior, System & Network Integration.
Space Planning / Full Design Plan
Presentation / Scheduling
Detail Styling / Apply Quotation
Applying Furniture, sign works and air-conditioning, etc.
One Stop Construction & Renovation Works
We always ready for your seamless business in Myanmar.
HR / Accounting Team
Design and Interior Work Team
System Network Integration Dept.
Thank you to all our client.
Headquarter and Branch Interior
Headquarter Bank Interior
Banking Network Implementation
Bank IT Network
Headquarter and Branch IT Infrastructure
Branch IT Infrastructure
Headquarter / Branch IT Infrastructure
Headquarter IT Infrastructure
DHL Yangon Factory Interior
Pepsi Yangon Office Interior
Yangon office Interior
Airport office Interior
Test Center IT Infrastructure
5 services you should use for your interior design business
on 18 May, 2021 by cube
အတွင်းပိုင်းပုံစံသည်အိမ်များကိုယခင်ခေတ်များထက်ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိစေပြီးဆွဲဆောင်မှု ရှိစေသည်။ ထိုအတွင်းပိုင်း ဒီဇိုင်းနယ်ပယ် တွင် ဖန်တီးမှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကြောင့် လက်တွေ့ကျသော ဒီဇိုင်းများ…
Consider Color Palette First အခြားအရာများကို အစီအစဉ် မချမီ အသုံးပြုလိုသော လိုချင်သောအရောင်များကိုသေချာစွာ ရွေးချယ်ထားဖို့ လိုအပ်သည်။ဒီဇိုင်းတွင် ထည့်သွင်းလိုသောအရာများကိုသေချာစွာ နားလည်ခြင်းသည် မလိုအပ…
2020 သည်အရာရာအားလုံးအတွက် အဆုံးအဖြတ်ပေးသောနှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး မိမိတို့၏အိမ်များတွင်သာနေထိုင်ရသောနှစ်လည်းဖြစ်သည်။ ကူးစက်ရောဂါများ ဖြစ်ပွားခြင်းကြောင့် မိမိတို့၏ အိမ်တွင် …
No.82 Sayarsan Road, Bahan Township ,Yangon, Myanmar
No.962, Bo Phoe Saw Street, 28 Ward, North Dagon Township, Yangon.